Waa kuma Shayddaanku? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Malaa'igtu waa jinniyo abuuray. Waxay ku qalabaysan yihiin rabitaan xor ah. Malaa'igta qoduuska ah waxay Ilaah ugu adeegaan sidii malaa'ig iyo wakiilo, waxayna u adeegaan jinniyo kuwa hela badbaadada, oo waxay la wehelin doonaan Masiixu markuu soo noqdo. Malaa'igta caasiyiinta ah waxaa loo yaqaanaa jinniyo, jinniyo shar leh iyo jinniyo wasakh leh (Cibraaniyada 1,14:1,1; Muujintii 22,6: 25,31; 2: 2,4; Matayos 1,23:10,1; Butros; Mark; Matayos).
Shaydaanku waa malaa'ig dhacday, oo ah hogaamiyaha ciidamada sharka ee dunida xagga ruuxa. Kitaabka dhexdiisa, waxaa looga hadlay siyaabo kala duwan: Ibliis, cadow, kan xun, gacankudhiiglaha, beenaale, tuug, jirdil, eedeeyaha walaaliheen, masduulaagii, ilaaha adduunyo, iwm. Isaguna wuxuu ku caasiyoobay Ilaah. Sababta oo ah saameyntiisa, wuxuu ku beeraa kala qaybsanaan, khiyaano iyo caasinimo dadka dhexdeeda. Isagu mar hore waa looga adkaaday Masiixa, iyo boqornimadiisa iyo saameyntiisa sida Ilaaha dunidan ah wuxuu ku dhamaan doonaa soo laabashada Ciise Masiix (Luukos 10,18:12,9; Muujintii 1: 5,8; 8,44 Butros 1,6: 12; Yooxanaa 3,1:2; Ayuub 12,10: 2-4,4; Sekaryaah 20,1: 3-2,14; Muujintii 1:3,8; Korintos; Muujintii); Cibraaniyada; Yooxanaa).
Baybalku wuxuu cadeeyay inuu jiro hal Ilaah oo keliya (Mal 2,10; Epheser 4,6), und er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist (eeg Casharka 5aad). Shaydaanku ma laha astaamaha astaamaha ee ilaahnimada. Isagu ma aha abuuraha, isagu meel ma joogo, ma aha wax wax garad ah, oo nimcooyin iyo xaqnimo buuxda kama buuxda, ma ah "kan keliya ee xoogga leh, oo ah boqorka boqorrada iyo sayidyada sayidyada oo dhan" (1 Timoteyos 6,15). Qorniinku wuxuu muujinayaa in Shaydaanka uu ka mid ahaa malaa'igaha la abuuray ee xaaladdiisii ​​asalka ahayd. Malaa'igta waxaa loo abuuray jinniyo u adeega (Nexemyaah 9,6; Cibraaniyada 1,13-14), oo leh xorriyadda xorta ah.
Malaa'igahu waxay fuliyaan amarada Eebbe wayna ka awood badan aadanaha (Sabuurradii 103,20: 2; 2,11 Butros). Waxaa sidoo kale loo soo sheegay inay ilaaliyaan rumaystayaasha (Sabuurrada 91,11) oo Ilaah ku ammaana (Luukos 2,13: 14-4; Muujintii, iwm).
Shaydaanka, oo magaciisa macnihiisu yahay "cadow", oo magiciisuna yahay Ibliis, wuxuu u horseedi karaa saddex meelood meel malaa'igaha inay caasi ku yihiin Ilaah. (Muujintii 12,4). In kasta oo riddadaas ka sokow, Ilaah wuxuu ku soo ururiyaa “kumanaan malaa'igood” hareerahiisa (Cibraaniyada 12,22). Jinniyona waa malaa'igo aan "dhawrin darajadooda jannada, laakiin ka tegey hoygooda" (Yuudas 6) oo Shaydaan ku biiray. «Maxaa yeelay Ilaah uma tudhin malaa'igihii dembaabay, laakiin wuxuu iyagii ku tuuray cadaabta silsilado mugdi ah oo wuxuu u gacan geliyey si xukun loogu haysto» (2 Butros 2,4). Hawlaha jinniyada ayaa ku xaddidan silsiladan ruuxi ahaaneed iyo astaamaha.
Erayga dhammaan qaybaha Axdiyada sida Ishac 14 iyo Yexesqeel 28 waxay muujineysaa in Shaydaanku uu ahaa malaa'ig gaar ah, isagoo u maleynaya inay tahay malag malaa'ig ah oo xiriir wanaagsan la lahaa Ilaah. Shaydaanku "wuu shaqaynayaa" laga bilaabo maalintii la abuuray ilaa xumaanta laga helay isaga, oo isagu wuxuu ahaa “xigmad iyo xigmad aad iyo aad u qurux badan, (Yexesqeel 28,12: 15).
Laakiin wuxuu noqday mid “shar ka buuxo”, qalbigiisuna wuxuu u kibray quruxdiisa aawadeed, xigmaddiisuna waxay ku dhacday sharaftii haybaddiisa aawadeed. Wuxuu daayay quduusnimadiisa iyo kartidiisa si uu naxariis ugu daboolo oo wuxuu u noqday “muuqaal” loogu talo galay halaagga (Yexesqeel 28,16: 19).
Shaydaanku wuxuu ka beddelay nambarka iftiinka (magaca Lucifa ee Ishacyaah 14,12 macnaheedu waa "Bixiye Iftiin") "xoogga gudcurka" (Kolosay 1,13:2,2; Efesos) markii uu go’aansaday in maqaalkiisa malaa'ig uusan ku filneyn oo uu doonayo inuu noqdo mid rabaani ah sida “Kan ugu sarreeya” (Ishacyaah 14,13: 14).
Is barbar dhig falcelintaas malaa'igtii Yooxanaa uu caabudi jiray: "Ha yeelin!" (Muujintii 19,10). Malaa'igta waa inaan la caabudin maxaa yeelay maahan Ilaah.
Bacdamaa ay bulshadu ka samaysatay sanamyo qiyamka xun ee uu Shaydaanku taageeray, Qorniinku wuxuu ugu yeedhay “Ilaaha dunidan” (2 Korintos 4,4), iyo "kan xoogga badan ee hawada xukunta" (Efesos 2,2), oo ruuxiisu kharribmay meel walba (Efesos 2,2). Laakiin Shayddaanku ma ahan ilaahnimo mana aha isla heerka ruuxiga ah ee Ilaah.
Waxa Shaydaanku samaynayo
Ibliisku wuxuu dembaaba bilowgii » (1 Yooxanaa 3,8). «Wuxuu ahaa gacankudhiiglaawe bilowgii mana aha runtu; maxaa yeelay, runtu kuma jirto isaga. Markuu been ku hadlo, tiisuu ku hadlaa. maxaa yeelay waa beenaaleh waana aabbaha beenta ah » (Yooxanaa 8,44). Been uu ku eedeeyay rumaystayaasha "maalin iyo habeenba xagga Ilaaheenna hortiisa" (Rooma 12,10).
Isagu waa shar miidhan, sidii uu isagu binu-aadmiga u sasabay oo shar galay wakhtigii Nuux. (Bilowgii 1:6,5).
Rabitaankiisu waa inuu ku yeesho saameyn xun kuwa rumaystayaasha ah iyo kuwa rumaystayaasha ah, si looga ilaaliyo "iftiinka dhalaalaya ee injiilka ammaanta Masiix" (2 Korintos 4,4) si aysan u helin “qayb ka mid ah dabeecadda rabbaaniga ah” (2 Butros 1,4).
Si taas loo gaaro, wuxuu Masiixiyiinta u horseedaa dembiga sida uu Masiixu isku dayay (Matayos 4,1: 11), oo wuxuu khiyaano u isticmaalay sidii Adam iyo Xaawa oo kale, si uu uga ilaaliyo “inay u fududeeyaan Masiixa” (2 Korintos 11,3). Si taas loo gaaro, wuxuu mararka qaar iska dhigaa inuu yahay "malaa'igtii iftiinka" (2 Korintos 11,14), oo iska dhig sidii wax aan ahayn.
Iyada oo loo marayo jirrabaaddaha iyo saamaynta bulshada uu ka taliyo, Shaydaanku wuxuu isku dayaa inuu dadka Masiixiyiinta ahi ka fogaado Ilaah. Qofka rumaystaha ahi wuxuu gooni uga soocayaa rabitaankiisa xorta ah ee uu ku dembaabo Ilaah, isaga oo siiya dabeecadda aadanaha ee dembiga leh, isagoo raacaya dariiqooyinka shaydaanka isla markaana aqbalaya saamayntiisa khiyaanada badan. (Matayos 4,1: 10-1; 2,16 Yooxanaa 17: 3,8-5,19; 2,2; 1,21: 1; Efesos 5,8: 3,15; Kolosay; Butros; Yacquub).
Laakiin waxaa muhiim ah in la xasuusto in Shaydaanka iyo jinniyadiisa, oo ay ku jiraan dhammaan tijaabooyinka Shaydaanka, inay ku hoos jiraan xukunka Ilaah. Eebbe wuu u oggol yahay howlaha noocaas ah maxaa yeelay waa rabitaanka Ilaahay in rumaystayaashu xor yihiin (ikhtiyaar xor ah) si loo gaaro go'aanno xagga ruuxiga ah (Ayuub 16,6-12; Mark 1,27; Luukos 4,41; Kolosay 1,16-17; 1 Korintos 10,13; Luukos 22,42; 1 Korintos 14,32).
Sidee buu rumaystaha ugu jawaabayaa Shaydaanka?
Jawaabta ugu weyn ee kitaabiga ah ee rumaystaha Shaydaanka iyo iskudayadiisa inuu nagu khiyaaneeyo dambiga waa "in la caabudo shaydaanka si uu kaaga cararo" (Yacquub 4,7; Matayos 4,1: 10), oo sidaas loo siiyo "ma bannaana" ama fursad (Efesos 4,27).
Adkeysiga Shaydaanka waxaa ku jira baryada badbaadada, u gudbinta Ilaah addeecista Masiixa, ka warqabka inta xun ee soo jiidata, helitaanka tayada ruuxiga ah (waxa Bawlos ugu yeedhay gelidda hubka oo dhan ee Ilaah), aaminaadda Masiixa ee innaga ina siiya Ruuxa Quduuska ah (Matayos 6,31; Yacquub 4,7; 2 Korintos 2,11; 10,4-5; Efesos 6,10-18; 2 Tesaloniika 3,3). Iska caabbinta sidoo kale waxaa loola jeedaa inaad maskaxda ku hayso feejignaan, "maxaa yeelay shaydaanku wuxuu u dhex socdaa sida libaax ciyaya oo raadinaya kii uu cuni doono" (1 Butros 5,8: 9).
Iskusoo wada duuboo, waxaan aaminsanahay Masiixa. 2 Tesaloniika 3,3 waxaan akhrinaa "in Rabbigu aamin yahay; way kaa xoojin doontaa oo kaa dhawri doontaa shar. Waxaan aaminsanahay aaminnimada Masiixa anagoo "ku adkaysanayna iimaankeenna" iyo tukashada aan si buuxda isugu dhiibno si aan sharka uga badbaadno (Matayos 6,13).
Masiixiyiintu waa inay kusii nagaadaan Masiixa (Yooxanaa 15,4) iskana ilaali inaad ku mashquusho howlaha Shaydaanka. Waa inaad ka fekertaa waxyaabo sharaf leh, caddaalad ah, saafi ah, jecel, oo leh sumcad wanaagsan (Filiboy 4,8) ka fikir halkii aad sahamin lahayd "qoto dheer ee Shaydaanka" (Muujintii 2,24).
Rumaystayaashu sidoo kale waa inay aqbalaan masuuliyada inay qaadaan masuuliyada dembiyadooda shakhsi ahaaneed oo aysan Sheydaan ku canaanan. Shaydaanka ayaa laga yaabaa inuu abuuray aasaaska shar, laakiin isaga iyo jinnigiisa maahee kuwa kaliya ee sii xajiya xumaanta maxaa yeelay ragga iyo dumarka ayaa abuuray kuna adkaystay rabitaankooda si ay u abuuraan sharkooda. Dadku, oo aan ahayn Shaydaanka iyo jinniyadiisa, ayaa mas'uul ka ah dembiyadooda (Yexesqeel 18,20; Yacquub 1,14-15).
Ciise hore ayuu u guuleystay
Mararka qaarkood aragtida ayaa lagu caddeeyaa in Eebbe weyne yahay, Shayddaanka yar, iyo in iyaga si uun loogu qabto khilaaf weligiis jira. Fikraddan waxaa loo yaqaannaa laba-labalaabnimo.
Aragtida noocan oo kale ahi waa mid aan kitaabiga ahayn. Ma jiro halgan socda oo ku saabsan sarreynta guud ee u dhexeeya awoodaha mugdiga, ee uu hoggaaminayo Shayddaanka, iyo awoodaha wanaagsan, ee uu hoggaaminayo Eebbe. Shaydaanku waa uun abuur la abuuray, iskutallaabtiisu hoosayso Eebbe, Eebana wax kasta wuu karaa. Ciise wuu ka adkaaday sheegashooyinka Shaydaanka oo dhan. Iimaanka xagga Masiixa waxaan horey u helnay guul, ilaahayna wax kasta isagaa leh (Kolosay 1,13:2,15; 1:5,4; 93,1 Yooxanaa 97,1; Sabuurradii 1; 6,15; 19,6 Timoteyos; Muujintii).
Sidaa darteed, Masiixiyiintu uma baahna inay ka walwalaan wax ku oolnimada weerarada Shaydaanka ee iyaga ka dhanka ah. Malaa'ig ama xoog ama awood toona "nagama saari karaan jacaylka Ilaah ee ku jira Ciise Masiix" (Rooma 8,38-39).
Waqti ka waqti ayaan ka akhrinaa Injiillada iyo Falimaha Rasuullada in Ciise iyo xertii uu si gaar ah u xoojiyay ay jinniyada uga saareen dadka jir ahaan iyo / ama ruux ahaan u dhib badan. Tani waxay muujinaysaa guushii Masiixu ka gaadhay awooda mugdiga. Dhiirrigelinta waxaa ka mid ahaa labada naxariis ee silica iyo xaqiijinta awoodda Masiixa, Wiilka Ilaah. Masaafurinta jinniyada waxay la xidhiidhay yaraynta silica ruux ahaaneed iyo / ama jir ahaan, maahan su'aasha ruuxiga ah ee ka saarista dembiga shaqsiyeed iyo cawaaqibteeda (Matayos 17,14-18; Mark 1,21-27; Mark 9,22; Luukos 8,26-29; Luukos 9,1; Fal 16,1-18).
Shaydaanku mar dambe ma abuuri doono dhul gariir, boqortooyooyin gariirin doonaa, duni cidla ka dhigi maayo, magaalooyinna wuu burburin doonaa, oo binu-aadmigu wuxuu ku xidhayaa guriga maxaabiista ruuxiga ah. (Ishacyaah 14,16: 17).
Ku alla kii dembaabaa waa Ibliiska; maxaa yeelay Ibliisku wuxuu dembaabaa bilowga. Intaas waxaa sii dheer, oo Wiilka Ilaah wuxuu u muuqday inuu baabbi'iyo shuqullada Ibliiska » (1 Yooxanaa 3,8). Adiga oo rumaystaha ku kicinaya inuu dembaabo, Shayddaanku wuxuu awood u leeyahay inuu u horseediyo geeri xagga ruuxiga ah, taas oo ah, ka-goynta Ilaah. Laakiin Ciise wuxuu naftiisa u huray "si dhimashadiisa uu awooda ugala wareego kuwa xakumo dhimashada, kan ah Ibliiska" (Cibraaniyada 2,14).
Nach der Rückkehr Christi wird er den Einfluss Satans und seiner Dämonen entfernen, zusätzlich zu den Menschen, die ohne Reue an Satans Einfluss festhalten, indem er sie ein für alle Mal in den Gehenna-Feuersee werfen wird (2 Tesaloniika 2,8: 20; Muujintii).
Shayddaanku waa malaa'ig dhacday oo iskudaya inay kharribto doonista Eebbe kana hor istaagto rumaystayaasha inay gaaraan awoodiisa ruuxiga ah. Waa muhiim in qofka muslinka ahi ka warqabo aaladda sheydaanku isagoo aan ka walwalsanayn shaydaan ama jinniyo si shaygu uusan uga faa'ideysan (2 Korintos 2,11).
waxaa qoray James Henderson